Siyaad Barre dhawr nin baa ku kala tegay imika way ka daran tahay oo waaba sebankii warka iyo warbaahinta,Siyasi cali Guray oo u digay Xukuumada Biixi | Biyoguurenews.com
Home Maqaallo Siyaad Barre dhawr nin baa ku kala tegay imika way ka daran...
Siyaad Barre dhawr nin baa ku kala tegay imika way ka daran tahay oo waaba sebankii warka iyo warbaahinta,Siyasi cali Guray oo u digay Xukuumada Biixi
Dhalinyaradan La Weetaynayaa Wax Kale Ma Doonayaan In la Dhegaysto Keliya Ayay u Baahan Yihiin. Dhego Maqla Iyo In Lala Doodo Oo Bal Soo Daaya Waxaad Sheegaysaan La Yidhaa Bay u Baahan Yihiin”Cali Maxamed Yuusuf (Cali Guray)”
DHALINTII WADDANKIYO DHULKAANU NAHOO!!
“Hal abuurnimadu waa hibo Ilaahay bixiyo. Marka la cadaadiyo ee la ciilo ciilka iyo cadhada maankiisa ayaa ku darara maskaxdiisuna way ku godlataa wuxu markaa dareenkiisa u cabri karaa si aanu u cabiri karin marka uu caadiga yahay ninka maalintaa uu ku qumbucdaa weligii kama hadho qaarkoodna waabay kuhaamaan oo lama seegaan waayo Ilaahay la kala baryi og baa run ah. Markuu sii daayo tix hurgumo iyo sun iyo waabay ah ayuu nefisaa. Waakii ninkii gabyay lahaa: HADAAN GABAYGA UURKOO BUKIYO ARAMI KAA KEENIN. Siyaad Barre dhawr nin baa ku kala tegay imika way ka daran tahay oo waaba sebankii warka iyo warbaahinta. Berigii hore dadka muddo ayuu warku ku gaadhi jiray bilo maaha mararka qaarkood sanado. Hadda kay qabsadaan bilo ayaa diiwaano laga buuxinayaa.
Seben waliba isaga ayaa dadkiisa wata maanta sebenkanina isaga ayaa Hadraawigiisa iyo Cabdiqayskiisa iyo Gaariyihiisa wata waana dhalinyaro. Hal abuurku waa dhalinyaro, suxufigu waa dhalinyaro, Garyaqaanku waa dhalinyaro, aqoonyahankuna waa dhalinyaro Ilaahay ha xafido dhamaantood eh. hormoodkoodu waa sodoneeyo da’doodu. Markaan intooda ahaa anigu qori iyo rasaas baan sitay iyaguna mikirifoon iyo qalin bay sitaane bal daya hada qoriba may qaadane.
Dhalinyaradan la weetaynayaa wax kale ma doonayaan in la dhegaysto keliya ayay u baahan yihiin. Dhego maqla iyo in lala doodo oo bal soo daaya waxaad sheegaysaan la yidhaa bay u baahan yihiin. Markaas ayay ogaanayaan inay jiraan oo dad jira oo codkooda la maqlo yihiin. Anigu 65 jir baan ahay kuma qancayo inanka sodoneeyadiisii ku jiraa in aan mustaqbalkiisa u danaynayo siduu isagu u danaynayo. Mustaqbalkana anigu kama lihi ee isaga ayaa aniga iga leh aniguna waan u qirsanahay inuu ilaashadana xaq buu u leeyahay.
Maalintii dhalinyaradii UFFO ay dhamaatay shegaysigii Maxkamaddu oo sadex maalmood soconayaysay ayaa markii laga soo dareeray nin ka mid ahaa qareenadii u doodayay oo labadii nin ee ugu aqoonta sareeyayna ahaa ayaanu gaar ula baxnay kii aanu ku kalsoonaynna wuu ahaa. Hal weedh oo keliya ayuu nagu qanciyay. Wuxu yidhi “ wax dambi ah oo maxkamadda horteeda kaga cadaaday ma jiro laakiin go’aanku kolay siyaasi buu noqonayaa oo waxay doonaan bay ku xukumi karaaan. Maxaa la ogaa Khamiis bay ahayd sabtidiina tii uu sheegayay ayaa dhacday xabsi daa’in, sodon sanadood, iyo 20 sanadood ayaa intii ugu badnayd gadhka loo geliyay. Hada xagii sharcigana wax dambi ah laguma cadayn oo in ooda laga soo qaado ayay ahayd. Dee waatii wixii ka dhacay la ogaa. Qareenka wax noo sheegay wuxu ahaa Ilaahay naxariistii janoo ha ka waraabiyo eh Faysal Xaaji Jaamac oo ahaan jiray Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee Somaliland
Siyaasi Cali Maxamed Yuusuf Cali Guray.
Previous articleTrump Oo Amray Qareenkiisa Inuu Been U Sheego Congress-ka
Next articleSuxiga Waryaha wayn ah ee cali Seenyo oo Sheegay in laga celiyay xadka lowyacado, iyo Eedaymo culus oo uu ku sheegay in aay hasato biiliiska somaliland